Tilmaanbixinta eray raadinta - Suomi–somali-sanakirja
Qaamuuska finish–soomaaliga waxaa erayada looga raadin karaa finish ahaan iyo soomaali ahaanba.
Qaamuusku waa mid shaashado kala duwan, si habboon ugu furma oo muuqaalkiisu wuxuu ku fariisanaysaa, hadba qalabka la adeegsanayo. Sawirrada tilmaanbixintan waa nooca muuqaalka shaashadda kombiyuutarrada caadiga ah.
Wax ku qoridda khaanadda raadinta
Qaamuuska waxaad wax uga raadin kartaa, adigoo erayga ku qora khaanadda raadinta. Ku qor khaanadda raadinta eray qaamuuseedka aad raadinaysid (tusaale helistä) ama qayb ka mid ah (tusaale heli). Markaad qoritaankaaga ku bilowdo khaanadda raadinta, qaamuusku wuxuu kuu soo bandhigayaa erayo finish iyo soomaali ah oo laga yaabo inay yihiin, kuwii aad raadinaysay.
Raadinta waxaad u adeegsan kartaa astaan weydiineed ?. Astaan walba ayay u dhigantaa. Sidoo kale waxaad adeegsan kartaa bar xiddigeed *. Waxay eray qaamuuseedka ku goynaysaa halka aad doonaysid oo waxay u dhigantaa astaan walba ama dhowr astaamood oo is daba yaalla.
Marka aad khaanadda raadinta ku qortid eray ama astaamo is daba yaalla, riix ENTER ama badhanka sawirka weyneysada leh.
Ku laabashada bilowga bogga
Markaad raadinta socodsiisid, waxaad arkaysaa natiijada: eray qaamuuseedka iyo macluumaadka la xiriira oo loo yaqaanno qormo erayeed. Sidoo kale waxaad arkaysaa liis erayo qaamuuseed ah, kuwaasoo ku bilaabanaya xarfo la mid ah, kuwii aad khaanadda raadinta ku qortay. Haddii aad raadinta u adeegsatay astaanta * ama astaanta ?, markaas liiska waxaa ka soo muuqanaya erayo ku habboon shuruudaha erayga la raadinayay. Caddadka erayada ee raadinta ku habboonaada waxaad ku arkaysaa liiska bilowgiisa. Erayadaasi waxay kugu xirayaan ama linki u yihiin qormo erayeedka.
Natiijada raadinta dhammaadkeeda waxaa ku oolli kara eray qaamuuseedyo finish ah, kuwaasoo ay ku daba yaallaan kuwooda af soomaaliga ah oo qawsas ku jira. Erayadaas soo baxay waxay isugu xigaan nidaam waafaqsan alifba’da af soomaaliga. Tusaale ahaan, haddii raadinta lagu qoro heli, natiijadu waxay noqonaysaa erayadan: helikobakteeri, helikopteri, helinä, helistin, helistä, helium, hommata (helid), keksiä (helid), löytyä (helid) iwm. Erayadani waa macnayaasha af soomaaliga ah ee eray qaamuuseedyada af finishka. Sidoo kale natiijada raadintu waxay noqon kartaa eray fallaari daba taallo. Erayada fallaarta ku astaysan waxay hogatusaalaynayaan macnaha rasmiga ah ee eray qaamuuseedka, tusaale ahaan eray qaamuuseedka hylly wuxuu faahfaahinayaa eray qaamuuseedka hyllykkö.
Haddii erayga aad raadinaysid, uusan eray qaamuuseed ahaan ugu jirin qaamuuska, wargelin baad ka helaysaa.